UMaMkhize uchitha eyokugxambukela othandweni luka-Andile noSithelo
UMAMKHIZE osephumele obala waveza ukuthi akananxa nomama wabazukulu bakhe, uSithelo, olaxazwe yindodana yakhe u-Andile, wathembisa umshado omunye wesifazane Izithombe: TWITTER
Nokubongwa Phenyane | December 22, 2021
USOMABHIZINISI waseThekwini, uShauwn Mkhize, owaziwa ngelikaMaMkhize useveze ukuthi akanasandla ekupheleni kobudlelwano bezothando phakathi kwendodana yakhe u-Andile nonina wezingane zayo uSithelo Shozi.
Lokhu kulandela ukuthi ngempelasonto kusabalale ama-video abekhombisa u-Andile ecela umshado entokazini yaseRichards Bay, uTamia Louw.
Lo mcimbi ububanjelwe eLa Lucia, eThekwini, nobekumenywe kuwona abangani abasondelene nemindeni yalaba bobabili kuphela.
Ezinkundleni zokuxhumana abaningi basole uMaMkhize ngokushadisa u-Andile ngenkani ngoba engamthandi uSithelo.
Abanye bayizwele kakhulu le ntokazi ebuye ibe uDJ, njengoba bethe emuva kokutholela u-Andile izingane ezimbili, bekumele ashade yona.
Ephendula ngabakade bemsola ngakho uMaMkhize, uveze ukuthi akazi ukuthi yini eholele ekutheni bahlukane, kodwa kulokho yena akanasandla futhi ngeke aze amzwise ubuhlungu omunye umuntu wesifazane.
USITHELO Shozi ozwelwe usizi ngabaningi, kuvela izindaba zokuthi ushiywe nguyise wabantwana bakhe u-Andile Mpisane nosethembise omunye wesifazane umshado
’’Mina anginamagqubu futhi akukho okubi engimbambele khona njengomama wabazukulu bami. Unginike abazukulu ababili abahle kakhulu nabasihlanganise naye kuze kube sekugcineni. Kimina uyohlala efana nondadakazi.
“Akekho umuntu engike ngamxosha futhi azikho izingane aphucwe zona. Ngizibophezele ekutheni abazukulu bami bakhule bethola uthando kuwona wonke umuntu futhi banakekelwe kahle,’’ kusho uMaMkhize.
Uveze ukuthi njengomama kungumsebenzi wakhe ukuyibonisa indlela indodana yakhe futhi ayeseke uma ithatha izinqumo.
“Angeke ngize ngimkhethele ukuthi athandane nobani. Ngiyiphilile mina impilo yami futhi ngafunda kuyona. Ngeke ngize ngithathe ithuba lokuthi aziphilele impilo yakhe futhi naye kube khona izifundo azifundayo. Ngimamukelile umama wabazukulu bami, nawo wonke amaphutha akhe, kukhona abangigxekayo ngalokho kodwa ngama kwelokuthi akekho umuntu ongenaphutha. Ngoba okunye kuthinta bona, angizongena ngokwenzeke othandweni lwabo.
“Bobabili sebethathe isinqumo sokuthi bahlukane futhi baphile impilo yabo, abazokwenza nje ukubambisana ekukhuliseni izingane. Njengomama, nami ngijabule ngokwenzekile ngamukela umakoti wakwami omusha. Njengabashadikazi abasha, ngibafisela konke okuhle kulolu hambo empilweni yabo. Angifuni ukuthi ngone lo mzuzu wabo, siyabonga kubona bonke abasixhasile,’’ kusho yena.
USithelo ubengakasho lutho ngalolu daba njengoba esanyamalele ngisho ezinkundleni zokuxhumana.